Maqal Wararka ugu waaweyn
Maqal Barnaamijka Waxay ila tahay ee falanqaynta Jimcaha
Maanta barnaamijka waxay ila tahay waxaan ku soo qaadanay xaaladda waddanka Suuriya gaar ahaan qabshada magaalada Xalab ee ciidamada dawladda Suuriya iyo jabka gaaray xoogagga mucaaradka.
Barnaamijka Waxay ila tahay ee falanqaynta Jimcaha
Maqal Wareysi safiirka Soomaaliya ee Sacuudiga
Dawladda Sacuudiga ayaa shaacisay inay joojisay xoolihii Soomaaliya laga soo dhoofin jiray ee dalkeeda la keeni jiray, ka dib markii sida ay sheegtay cudurro laga helay xoollo Soomaaliya laga keenay.
Wareysi safiirka Soomaaliya ee Sacuudiga
Maqal 100 dumar: Farxiyo Cabdi waxay caawisaa dhallinta aan waxbaran
Taxana boqol dumar ah oo aan ku eegno dumarka u adeega bulshada, waxaan maanta ku eegeynaa Farxiyo Cabdi oo caawisa dhallinyarada iskuulka ka hartay ee shaqo la'aanta ah.
Maqal Dood cilmiyeed dhinaca dumarka Soomaalida oo lagu qabtay safaarada Maraykanka
Maqal Falanqayn: Shirka madasha wadatashiga
Maanta waxaa lagu wadaa in Muqdisho ay ku kulmaan madaxda madasha wadatashiga. Shirkan waxaa la saadaalinayaa in diiradda lagu saari doono geeddi socodka qorshaha doorashooyinka Soomaaliya oo dhowr goor dib u dhac uu ku yimid.
Falanqayn: Shirka madasha wadatashiga
Maqal Bandhig Dhaqameed lagu qabtay Minnesota (Sawirro)
Bandhig Dhaqameed lagu soo bandhigayo taariikhda, hiddaha, iyo agabka dhaqanka Soomaalida ayaa lagu qabtay xarunta dawladda ee deegaanka Hennepin County oo ah halka maamulo magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Bandhig Dhaqameed lagu qabtay Minnesota (Sawirro)
Maqal Gurmad loo samaynayo abaaraha Puntland
Maqal Doorshooyinka xubnaha baarlamaanka ee maamulka Koonfur Galbeed oo dhamaaday
Magaalada Baydhabo waxaa xalay lagu soo gabagabeeyay doorashada xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ka soo galaya deegaanada maamulka Koonfur Galbeed, kuwaas oo tiro ahaan gaaraya 69 xildhibaan.
Doorshooyinka xubnaha baarlamaanka ee maamulka Koonfur Galbeed oo dhamaaday
Madaxda waddamada Khaliijka ayaa shir heerkiisu ballaaran yahay waxay ku leeyihiin dalka Baxrayn, waxaana shirkan looga arrinsanayaa arrimo ay ka mid yihiin xaaladaha wadamadaas ka taagan.
Falanqayn: Shirka dalalka Khaliijka
Maqal Garoowe oo lagu qaban doono tartanka gabdhaha ee kubada koleyga
Magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland ayaa dhawaan waxaa lagu qaban doonaa tartanka gabdhaha ee basketballka.
Garoowe oo lagu qaban doono tartanka gabdhaha ee kubada koleyga
Maqal Isbitaal bixin kara adeegyada kala duwan ee caafimaadka oo laga furay magaalada Maxaas
Magaalada Maxaas ee gobolka Hiiraan waxaa markii ugu horreysay taariikhda laga hirgeliyay isbitaal guud oo bixinaya adeegyo caafimaad oo ay ka mid yihiin daweynta iyo qaliinada.
Isbitaal bixin kara adeegyada kala duwan ee caafimaadka oo laga furay magaalada Maxaas
Maqal Wiil dhalinyara ah oo uu naafeeyay cudur balse aanan quusan
Maxamed Muuse Jaamac (Maxamed Haldoor) waa wiil dhallinyaro ah oo isagoo arday ahaa uu curyaamiyay cudurka manajaytiska ama qoorgooyaha loo yaqaanno balse aanan nolosha ka quusan.
Wiil dhalinyara ah oo uu naafeeyay cudur balse aanan quusan
Maqal Dhallinyarada Soomaalida iyo siyaasadda UK
Dhallinyarada Soomaalida iyo siyaasadda UK
Maqal Dhageyso: Dagaal culus oo ka socdo nawaaxiga Qandala
Wararka ka imanaya dhinaca Puntland ee Soomaaliya waxay sheegayaan in ciidammada maamulka Puntland ay dib u qabteen magaalada xeebta ku taal ee Qandala.
Dhageyso: Dagaal culus oo ka socdo nawaaxiga Qandala
Maqal Xildhibaan dalbaday in xoolaha Sooomaalida Kenya suuq loo raadiyo
Baarlamaanka dalka Kenya ayaa loo gudbiyay dood ku saabsan in dowladda ay sameyso guddi heer qaran ah oo ka shaqeeya hormarinta deegaanada ay ku nool yihiin dadka Xoola dhaqatada ah.
Xildhibaan dalbaday in xoolaha Sooomaalida Kenya suuq loo raadiyo
Maqal Afrika maxay ka baran kartaa doorashadii Gambia?
Madaxweynaha dalka Gambiya, Yaxya Jaammeh, ayaa si lama filaan ah ku aqbalay in doorashadii dalkaasi ka dhacday koowdii bishan loogaga adkaaday, uuna xilka wareejinaayo.
Afrika maxay ka baran kartaa doorashadii Gambia?
Maqal Wiilal Soomaali ah oo lagu dilay dalka Sweden
Dalka Sweden waxaa xalay lagu dilay labo wiil oo walaalo ahaa, waxaana arrintaasi ay walaac badan ku abuurtay Soomaaldia halkaa deggan.
Wiilal Soomaali ah oo lagu dilay dalka Sweden
Maqal Xaliimo Adan: Kama qeyb geli doono tartanka quruxda mar kale
Xaliima Aadan oo 19 jir ah oo iyadoo xijaaban u tartantay gabadha ugu quruxda badan gabdhaha gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay in aanay markale tartamayn.
Xaliimo Adan: Kama qeyb geli doono tartanka quruxda mar kale
Maqal Xaaladii ugu dambeeysay ee Abaaraha Soomaaliya
Bilihii ugu dambeeyay abaaro ba'an ayaa waxa ay halakeeyeen qeyba badan oo ka mid ah Soomaaliya.
Xaaladii ugu dambeeysay ee Abaaraha Soomaaliya
Maqal Filim ku saabsan Mo Faraax oo dhawaan soo baxaya
Maalinta Isniinta ee shanta bishan waxaa soo baxaya film documentray cusub oo la yiraa "MO FARAH: NO EASY MILE" oo ka hadlaya taariikhda orodyahanka ugu biladaha dahabka badan ee Britain.
Filim ku saabsan Mo Faraax oo dhawaan soo baxaya